League of Legends ရဲ့ Preseason 2021 (Update အနှစ်ချူပ်) – Gaming Noodle
League of Legends ရဲ့ Preseason 10.23 Patch အနှစ်ချူပ်
League of Legends ဟာ သူတို့ရဲ့ Season အသစ်တစ်ခုကို အမြဲတမ်း ဇန်နဝါရီမှာ အစပြုပြီး ဒီဇင်ဘာမှာ အဆုံးသတ်လေ့ရှိပါတယ်။ Season အသစ်ကို မစခင်ကတည်းက ကြိုလေ့လာလို့ရအောင် Pre-Season ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ တစ်လလောက် စောပြီး update ရဲ့ Patch Note တွေ ထွက်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ (Dota မှာတော့ ဒီနေ့ Update ထွက်မယ်ဆို ဒီနေ့မှ Update တစ်ခါတည်းဆွဲဆိုပြီး ဗြုန်းစားကြီး ထွက်လာတာမျိူးက Dota Player တွေအတွက်တော့ အသားကျနေပါပြီ။)
League ရဲ့ Season အသစ်တိုင်းမှာလည်း ထူးထူးခြားခြား update ပြောင်းတာတွေပါလာတတ်ပါတယ်။ မနှစ်ကဆို Season 10 အတွက် Elemental Drake တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ Update ကြီး ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်ဆိုရင်လည်း Season 11 အတွက် Item Shop တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလိုက်တဲ့ Pre-Season 10.23 ဆိုတဲ့ update ထွက်လာတယ်။
ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် အများကြီး လို့ ထင်ရပေမယ့် အဓိက အချက်တွေကိုပဲ စုလိုက်ရင် နည်းတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
League မှာက Update ထွက်ရင် update အချက်တစ်ခုတိုင်းအတွက် Description စာသားတွေနဲ့ ဘာကြောင့်ပြောင်းရတယ်၊ ပြီးတော့ ဒီ item ရဲ့ Storyline တွေကအစ အကုန်သေးစိတ် ရေးထားတော့ အများကြီးလို့ထင်ရတာတစ်ခုကြောင့်ပါ။ တကယ်တမ်းက အခု ထွက်လာတဲ့ Mythic Forge Update ရဲ့ ကိန်းဂဏန်းလေးတွေ တစ်ခုချင်းစီကို ဖယ်ပြီး Game ရဲ့ update သဘောတရားကို ခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့ အချက် (၁၂) ချက် ပဲ ရှိပါတယ်။
အနှစ်ချူပ်ပြောရရင် Season 11 Mythic Forge Update ဆိုတာကတော့
1. Champion တိုင်းမှာ တစ်ခုစီပဲ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့ Mythic Item ဆိုတဲ့ Class တစ်ခုပါလာပါတယ်။
2. Mythic Item စုစုပေါင်း (၂၃) ခု ရှိပါမယ်။
3. Mythic Item ရဲ့အောက်က တစ်ဆင့် ပုံမှန်ဆက်နေကြ item အကြီးတွေကို Legendary Class လို့ခေါ်ပြီး ကြိုက်သလောက်ဆက်လို့ရပါတယ်။
4. Mythic Item တစ်ခု ဝယ်လိုက်တာနဲ့ Inventory ထဲမှာ ကိုယ်ဆက်ထားတဲ့ Legendary Item တွေအားလုံးကို တိုးပေးတဲ့ Buff တစ်ခုစီပါလာပါတယ်။
5. ရှိပြီးသား Legendary Item တွေထဲက (၁၉) ခုကို Removed လုပ်ထားပြီး
6. အစားထိုး Legendary Item အသစ် (၁၃) ခု ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
7. တခြား Legendary Item (၂၈) ခုကို Update ပြန်လုပ်ထားပါတယ်။ (အနည်းငယ် Rework လုပ်တာပါ)
8. Jungle Champion တွေအတွက် Smite ကို အရင်ကထက် ပိုရှင်းအောင် လုပ်ပေးထားတယ်။
9. Smite Spell ကို ယူ၊ နှစ်ခုပဲ ရှိတဲ့ Jungle Item (AP or AD) တစ်ခုဝယ်၊ အဲ့ဒီ့ item ကို ၄ ခါ သုံးလိုက်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ Smite Talent ဟာ AD Chilling Smite or AP Chilling Smite အဖြစ်နဲ့ Upgrade ဖြစ်ပြီး Inventory ထဲက ပျောက်သွားပါမယ်။ Season 10 ကလို အပြာ၊ အနီ ထဲမှာ ဝါ၊ စိမ်း၊ နီ၊ ပြာ စိန်တုံးတွေနဲ့ ရွေးစရာ များပြားတဲ့ Jungle Item တွေ (၁၂) ခုစလုံးကို Removed လုပ်လိုက်ပါတယ်။
10. Jungle Champion ရဲ့ Inventory (၆) ကွက်ထဲမှာ Jungle သီးသန့် item ဆိုတာမျိူး ထည့်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။
11. Rune (၈) ခုကို Balance Change ထားပါတယ်။
12. Champion (၁၇) ကောင်ကို Balance Change ထားပါတယ်။
အနှစ်ချူပ်အနေနဲ့ကတော့ ဒီ (၁၂) ချက်ကိုပဲ သိထားရင် လုံလောက်ပါပြီ။ အဲ့ဒါကို အသေးစိတ် ပြန်ခွဲပြီး Item တစ်ခုချင်းစီ၊ Champion တစ်ကောင်ချင်းစီ ပြန်ရှင်းမှသာ Update က အများကြီးဖြစ်လာတာပါ။ ဒီအပိုင်းမှာ Item တွေ အသစ်တွေဆိုပြီး ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်သာ အများကြီးလို့ ထင်ရသလို ရှိပါလိမ့်မယ်။ တကယ်က Remove လုပ်လိုက်တဲ့ Item ကို နာမည်ပြောင်းပြီး Mythic Item တွေထဲ ပြန်ထည့်ထားတာတွေလည်း တော်တော်များများပါပါတယ်။ ဥပမာ – Iceborn Gauntlet ကို Remove လုပ်ပြီး Frostfire Gauntlet ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ Mythic Item အဖြစ် ပြန်ထည့်ထားတာမျိူး၊ Luden’s Echo ကို Luden’s Tempest ဆိုပြီးပြန်ထည့်ထားတာမျိူးပါ။ အားလုံးက ကိုယ်မသိနိုင်တဲ့ အစိမ်းသက်သက် item တွေချည်းပဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
(၁ဝ) နှစ်တာလုံး အသားကျလာတဲ့ Item Icon ပုံစံတွေကို ပိုလှတဲ့ Icon တွေ နဲ့ ချိန်းပေးလိုက်တာမို့လို့ ခဏလောက်တော့ မျက်စိရှုတ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဘာပဲပြောပြော သေချာတာ တစ်ခုက League ရဲ့ Update ပေးတဲ့ပုံစံဟာ Player တွေအတွက် ပြင်ဆင်ချိန်ကို သေချာ စီစဉ်ပေးထားတဲ့အတွက် ဒီလို Community ကို အလေးထားတဲ့ တစ်ချက်ကတော့ Dota ထက်တော့ သာပါတယ်။ Patch Note ကို အမြဲ ၁ ပတ်လောက် စောပြီး ဖတ်ခိုင်းထားပြီး Season အသစ်မှာ Rank Grind တဲ့အခါ ဒီအပြောင်းအလဲတွေကို အသားကျစေဖို့အတွက် Season Rank Reset မကျခင် Pre-season ဆိုပြီး တစ်လကျော်လောက် ပေးဆော့ထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ item, gameplay တွေမှာ Broken ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ချက်တွေ ရှိရင် ဒီ Pre-season ကတည်းက ပြန်ပြင်လိုက်လို့လည်း ရပါသေးတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ တော်တော်လေး သေသပ်တဲ့ Riot ပါပဲ။